कांग्रेस पदाधिकारी : कोषाध्यक्ष बाहेक सबैले चुनाव जित्नुपर्ने ! - कांग्रेस पदाधिकारी : कोषाध्यक्ष बाहेक सबैले चुनाव जित्नुपर्ने !
पदाधिकारी संख्या ८ जनाको बन्यो !
२०७५, ३ पुष, 10:04:56 PM
काठमाडौँ । लामो रस्साकस्सीपछि नेपाली काङ्ग्रेसले पदाधिकारीको संख्या र छनोट प्रक्रिया टुंगो लगाएको छ । विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको सङ्ख्या र छनोट प्रक्रिया टुंग्याएपछि कांग्रेस विवाद समाधानमा हुने अपेच्छा गरिएको छ ।
पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बेलूकी बसेको पदाधिकारी बैठकले विवादको टुङ्गो लगाएको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
यसअघि विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा सहमति हुन नसक्दा उक्त प्रतिवेदन महासमिति बैठकमा पेश हुन सकेको थिएन । काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक चार दिनदेखि चलिरहेपनि विधानका कारण अलमलमा परेको थियो ।
पदाधिकारी बैठकले विधानमा कूल १६१ केन्द्रीय समिति रहने र त्यसमा ३३ केन्द्रीय सदस्य समावेशिताका आधारमा सभापतिबाट मनोनीत हुने निर्णय गरेको छ ।
काङ्ग्रेसमा अब एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्षसहित आठ पदाधिकारी रहनेछन् ।
कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने र कोषाध्यक्ष भने निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ ।
पदाधिकारी बैठकले गरेको निर्णयअनुसारको विधान मस्यौदा प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रीय समितिले पारित गरी भोलिको महासमिति बैठकमा पेश हुने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
गत मङ्सिर २९ गतेदेखि शुरु महासमिति बैठकमा यसअघि नै राजनीतिक, साङ्गठनिक, समग्र आर्थिक नीति र पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदन पेश भई छलफल जारी छ ।